चीन कोटिंग विलायक निर्माता र आपूर्तिकर्ता - पूर्वी Argon रासायनिक
घर > उत्पादनहरु > कोटिंग विलायक
कोटिंग विलायक निर्माताहरु
कोटिंग विलायक अझै पनी कोटिंग उद्योग मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, कोटिंग सामाग्री को बारे मा 47% को लागी लेखांकन। कोटिंग्स मा प्रयोग विलायक कोटिंग्स को प्रकार अनुसार फरक हुन्छ।
विलायक कोटिंग को प्रक्रिया को दौरान एक तरल अवस्था मा कोटिंग को फिल्म-गठन पदार्थ भंग वा फैलिएको छ, र तरलता प्राप्त गर्दछ, जो सतह कोटिंग को लागी उपयुक्त छ। यद्यपि कोटिंग विलायक कोटिंग फिल्म को एक घटक होईन, यो कोटिंग फिल्म को प्रदर्शन (जस्तै चमक, flowability, र आसंजन को रूप मा) मा एक ठूलो प्रभाव छ।
कोटिंग विलायक diluents र उपचार एजेन्टहरु मा विभाजित गर्न सकिन्छ, जो भंग र रंग मा फिल्म बनाउने पदार्थहरु लाई पतला गर्न सक्छ, रंग को चिपचिपाहट कम गर्न सक्छ; कोटिंग भण्डारण को स्थिरता बढाउनुहोस्, फिल्म निर्माण गर्ने पदार्थ को सीमेन्टिंग बाट रोक्नुहोस्; पेंट फिल्म धेरै बाक्लो, धेरै पातलो वा लेपित ब्रश अंक र गरीब ब्रश प्रदर्शन को कारण झुर्रियाँ हुन बाट बच्न; यो कोटिंग को सतह मा कोटिंग को wettability र पारगम्यता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, र कोटिंग को आसंजन बृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
पातलो एक कार्बनिक विलायक हो, क्रम मा रंग को चिपचिपाहट घटाउन, यस प्रकार रंग को प्रदर्शन मा सुधार र राल संग राम्रो miscibility संग एक तरल पदार्थ जोड्ने।
उपचार एजेन्ट, पनी कडाई एजेन्ट को रूप मा जानिन्छ, पदार्थ वा मिश्रण को एक वर्ग हो कि बृद्धि वा उपचार प्रतिक्रिया नियन्त्रण।
चीन मा एक पेशेवर कोटिंग विलायक निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, ईस्ट आर्गन केमिकल अनुकूलित को निर्माण को समर्थन गर्दछ कोटिंग विलायक। एकै समयमा, सबै उत्पादनहरु फैशनेबल, उन्नत, टिकाऊ र उत्तम दर्जेको, र CE प्रमाणीकरण छन्। हाम्रा उत्पादनहरु को उच्च गुणस्तर आंशिक रूपमा छ किनकि हामी हाम्रो आफ्नै कारखाना छ र आंशिक रूपले हामी अनुभवी र कुशल कामदारहरु छ। के तपाइँ थोक कोटिंग विलायक लाई समर्थन गर्नुहुन्छ? निस्सन्देह, यदि तपाइँ थोक, हामी तपाइँलाई सस्तो मूल्य, छुट र उद्धरण प्रदान गर्न सक्छौं। यसको अतिरिक्त, यो छुट उत्पादनहरु किन्न ठीक छ। यदि तपाइँ हामी संग सहयोग गर्न र उत्पादन किन्न चाहानुहुन्छ, हामी यसलाई कम मूल्य मा बेच्न सक्छौं। जस्तै भनिएको छ: सहयोग एक जीत-जीत हासिल गर्न! हामी तपाइँ संग सहयोग र एकसाथ साझा विकास साकार गर्न को लागी तत्पर छौं।